Le na-ebinyere Pinterest nke Mobile? | Martech Zone
Le na-ebinyere Pinterest nke Mobile?
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 3, 2014 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Dị ka ọ dị na weebụ, email na usoro ọ bụla ọ bụla - ndị na-ere ahịa ga-echebara echiche ka ha na-emepụta, gosipụta ma kesaa ọdịnaya ha na saịtị ha, ozi na site na nyiwe ndị ọzọ. Otu ikpo okwu nke nwere ezigbo ọnụnọ bụ Pinterest Ejirila ọtụtụ nde ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ekwentị ekwentị Pinterest wee gaa n'ihu na-abụ ikpo okwu nchọpụta ewu ewu. N’ezie, mmadụ 3 n’ime mmadụ anọ ọ bụla bịara ile anya na Pinterest nọ na ngwa mkpanaka ma ọkara nke mmekọrịta mmadụ niile na iPads sitere na Pinterest!
Ulo oru ndi n'eme ihe ikpo okwu na optimizing maka mobile ngwaọrụ na-abawanye ọhụhụ ha. Ndị nleta ọhụụ ọhụụ na Pinterest zigara ndị na-ere ahịa amụbaala site na 46%!
Kemgbe ntọhapụ nke ngwa mkpanaka Pinterest, iji netwọkụ mmekọrịta na ekwentị mkpanaka arịala elu ma e jiri ya tụnyere ụdị nke web wee na-eto. Pinterest bụ ugbu a otu n'ime ndị na - enye aka maka okporo ụzọ maka ndị na - ede blọgụ na ụdị yana nke a bụ ekele Pinterest mobile. Yabụ kedu ka ị ga - esi mee ka ohere gị na - ekekọrịta ma na - apịa aka na ngwa mkpanaka ahụ? Nke a bụ ihe nduzi maka ire ahịa nke ọma na ekwentị Pinterest.
Ihe omuma ihe omuma na-enye ntinye aka na oke agwa, onyonyo onyonyo, itinye akwukwo, njiko na obuna na-ekwu banyere ya Pinterest Mobile Ntụtụ Ọ SDK iji tinye Ntụtụ mkpọchi na onyonyo site na mkpanaka gị na ngwa.
Tags: animation gifsgifsiosios nyocha ọchụchọnjikarịcha ekwentịekwentị mkpanaakaebuli mobilepin ya android sdktuo ya iostuo ya iphonetụgide ya SDDPin-Ọ Buttonpinterest agwa okenjikọ pinterest clickablepinterest mkpụrụedemedepinterest oyiyi okeekwentị mkpanaakaSDK mkpanaka pinteresturl uririezigbo oge pinning
Vnyagharị Iwu Wacky nke Asọmpi Facebook na Sweepstakes
Ọdịnihu nke Utopian nke Na-ere Ọwa